အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ တကိုယ်လုံးလှုပ်ခါပြီး ပုရိသတို့အကြိုက် ကပြထားတဲ့ XMUE XMUEရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး – Shwe Ba
Homepage / Cele News / အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ တကိုယ်လုံးလှုပ်ခါပြီး ပုရိသတို့အကြိုက် ကပြထားတဲ့ XMUE XMUEရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး
photo မော်ဒယ်လ် အမှူး က တော့ လက်ရှိ မှာ အောင်မြင် လျက် ရှိနေ တဲ့ photo မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ချစ်စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေကို လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက်ကို တင်ပေးလေ့ ရှိတဲ့ သူပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။အမိုက်စား ဖက်ရှင် လေးတွေ အလန်း စား ဖက်ရှင် လေးတွေ ကို ဝတ်ဆင် လေ့ရှိပြီး ချစ်စ ရာကောင်း လွန်း တဲ့ အပြုံးလေး တွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားနိုင် ခဲ့တဲ့ သူမ က တော့ ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကို အခိုင်အမာ ရယူထား နိုင်ခဲ့တဲ့ photo မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။
ယခု အခါမှာ လည်း ကိုယ်လုံးလေးကို အစွမ်းကုန်လှုပ်ပြီး ကပြထားတဲ့ ဗီဒီယို လေးကို မျှ ဝေ ထားတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ယောကျာ်း လေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင်အား ပေး မှုရော မိန်းက လေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကိုပါ အခိုင်အမာ ရယူထား နိုင်ခဲ့တဲ့ သူမ က တော့ အမိုက်စား ပုံရိပ် လေး တွေ ကို ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ရှေ့ကို ချပြ လေ့ရှိပါ တယ် … .
သူမ က တော့ ယခုမှာ အသည်း ယားစရာကောင်း လောက် အောင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိလွန်းနေ တဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယို လေးနဲ့ ပရိသတ် တွေရဲ့ ရင်ကို လှုပ်ခပ် သွားစေ ခဲ့ပါတယ် ။ သူမရဲ့ လွတ်လပ် ပေါ့ပါး တဲ့ ဖက်ရှင် လေးနဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းလွန်း နေခဲ့ တဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေဟာ ပရိသတ် တွေကို အချစ် တွေ ပိုစေခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပရိသတ် တွေ အတွက် မော်ဒယ်လ် အမှူးရဲ့ ကြွေလောက် စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံစံလေး နဲ့ လှပနေ တဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး ကို ပြန် လည် ဖော်ပြပေး လိုက် ပါတယ် နော် … .
photo ေမာ္ဒယ္လ္ အမႉး က ေတာ့ လက္ရွိ မွာ ေအာင္ျမင္ လ်က္ ရွိေန တဲ့ photo ေမာ္ဒယ္လ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး ခ်စ္စရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ ပုံရိပ္ေလး ေတြကို လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ ထက္ကို တင္ေပးေလ့ ရွိတဲ့ သူပဲ ျဖစ္ ပါတယ္ ။အမိုက္စား ဖက္ရွင္ ေလးေတြ အလန္း စား ဖက္ရွင္ ေလးေတြ ကို ဝတ္ဆင္ ေလ့ရွိၿပီး ခ်စ္စ ရာေကာင္း လြန္း တဲ့ အျပဳံးေလး ေတြ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားနိုင္ ခဲ့တဲ့ သူမ က ေတာ့ ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈ ကို အခိုင္အမာ ရယူထား နိုင္ခဲ့တဲ့ photo ေမာ္ဒယ္လ္ တစ္ေယာက္ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။
ယခု အခါမွာ လည္း ကိုယ္လုံးေလးကို အစြမ္းကုန္လႈပ္ၿပီး ကျပထားတဲ့ ဗီဒီယို ေလးကို မၽွ ေဝ ထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ေယာက်ာ္း ေလး ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္အား ေပး မႈေရာ မိန္းက ေလး ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈ ကိုပါ အခိုင္အမာ ရယူထား နိုင္ခဲ့တဲ့ သူမ က ေတာ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ ေလး ေတြ ကို ပရိသတ္ ေတြ ရဲ့ ေရွ႕ကို ခ်ၿပ ေလ့ရွိပါ တယ္ … .
သူမ က ေတာ့ ယခုမွာ အသည္း ယားစရာေကာင္း ေလာက္ ေအာင္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိလြန္းေန တဲ့ အလန္းစား ဗီဒီယို ေလးနဲ႔ ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ရင္ကို လႈပ္ခပ္ သြားေစ ခဲ့ပါတယ္ ။ သူမရဲ့ လြတ္လပ္ ေပါ့ပါး တဲ့ ဖက္ရွင္ ေလးနဲ႔ ခ်စ္စရာ ေကာင္းလြန္း ေနခဲ့ တဲ့ ပုံရိပ္ေလး ေတြဟာ ပရိသတ္ ေတြကို အခ်စ္ ေတြ ပိုေစခဲ့ တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ ေမာ္ဒယ္လ္ အမႉးရဲ့ ေႂကြေလာက္ စရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ ပုံစံေလး နဲ႔ လွပေန တဲ့ အမိုက္စား ဗီဒီယိုေလး ကို ျပန္ လည္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ ပါတယ္ ေနာ္ … .
Previous post အောက်ပိုင်း အတွင်းသား အလှလေးတွေပေါ်လွင်အောင် ပို့စ်လေးပေးပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုကိုချပြလိုက်တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ
Next post ရင်ခုန်စရာ ညအိပ်ဝတ်စုံလေးနဲ့ အလန်းလေးလုပ်ပြလိုက်တဲ့ ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး